चिन्ता राष्ट्रियताको कि सीमाङ्कनको ?
नेपाली जनतालाई प्रदेश सीमाङ्कनभन्दा पनि स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रको नागरिक हुन पाउने या नपाउनेको चिन्ता हो । नेपाली जनतालाई नेपाल फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला मिसाउने वा झिक्नेभन्दा पनि छिमेकी देशले सुस्ता र महेशपुरदेखि कालापानी र नालापानीसम्मको भूभाग मिचेको चिन्ताले उब्जाए..
मधेस समस्या समाधानको मुख्य उपाय !
नेपालमा धेरै आन्दोलनहरु भए । त्यसले परिवर्तनहरु पनि ल्यायो तर व्यक्ति मात्र फेरिए, शासन सञ..
संशोधनमा एमाले सहमतिमा आउने आधारहरु खोजौँ
नेपालमा संविधान संशोधन र बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी सवैधानिक विषय ठट्टा हासखेलको विषय बन्दै..
क्यास्त्रोको आदर्श र हाम्रा नेताहरुको अवस्था
क्युबाका लोकप्रिय नेता फिडेल क्यास्त्रो संसारकै लोकप्रिय नेता बन्न सफल भए । उनी किन लोकप्र..
सरकारले प्रदेश नं. ५ को सीमांकनमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पा..
प्रदेश नं. ५ लाई नटुक्र्याऔं
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको हल्लाले सिङ्गो प्रदेश नै आन्दोलनमा छ । यद्यपि मङ्सिर १२ गते दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन । संविधान संशोधनद्वारा तराईका आन्दोलनरत मधेसिवादी दल र थरुहटको माग सम्बोधन गर्ने भनिए पनि उनीहरु समेत प्रस्तावित ..
प्रदेश नं. ५ को फेरबदल नै किन ?
अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सद्बुद्धि प्रकट गर्दै काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चाको स्पस्ट धारणा नआएसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव हालका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनका निम्ति तयार पारेको खाकामा ५ नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश ४ मा राख्ने । सबै प्रदेशब..
संविधान संशोधनको भयानक खिचातानी भइरहेको छ । संविधान संशोधन भयो भने देश स्थिरतातर्फ जान्छ ? चुनाव हुन्छ ? राजनीतिक झमेला समाधान हुन्छ ? अह“, त्यस्तो होला भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा पनि त्यस्तो देखिंदैन । समस्या संविधानमा हो त ? अह“, संविधानमा त समस्या ह“ुदैहोइन । त्यसो भए समस्या केमा छ त […]
एक आदर्श व्यक्तिको निधन
“क्रान्ति गुलाबको फूलको बिस्तारा होइन, क्रान्ति भूत र भविष्य बीचको लडाइँ हो ।”– फिडेल क्यास्त्रो फुल्जेनिको बातिस्ता र जाल्देभर मिलेर सन् १९५२ मा क्युबाको सत्ता हत्याएपछि फिडेल क्यास्त्रो विद्रोहको कमान्ड सम्हालेर भूमिगत भएका थिए । त्यसको एक वर्षमै उनी बातिस्ताको विरोधमा जनता उतारेको आरोपमा जेल परे । त्यसको करिब दुई वर्षपछि उनला..
‘२/४ वर्षअघि चप्पल लगाउने नेताको कसरी बन्यो महल ?’
दशवर्षे युद्धमा थुप्रै नौंजवानहरुले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो । थुप्रै नेपाली युवा र जनताहरु शहिद हुनुभयो । हजारौं आमाहरुका काख रित्तिए । चेलीहरुका सिन्दुर पुछिए । हजारौंं बालबालिकाहरु टुहुरा भए । सयौंं योदाहरु घाइते अंगभंग छौं । म सधैं सोच्ने गर्छु – २००७ सालदेखि २०३६ साल २०४६ साल १० वर्षे युद्ध, २०७३ सालका जनआन्दोलनहरु भए कति [..
क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ मिसन !
मंसिर १० गते एकैदिन देशभरका प्राय सवै जिल्लाहरुमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु एकैसाथ जुर्मुराए।यस दिन देशका ५० जिल्लामा एकैसाथ अभियानको शुभारम्भ भयो । यो अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा संचालित डेढ महिने क्रान्तिकारी विद्यार्थी जागरण अभियानको थालनीको दिन हो । जसरी संघीय गणतन्त्र नेपालको इतिहास माओवादी विना पूरा हुन सक्दैन ठिक त्यसैगरी म..
देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारीको अभाव, लगानीमैत्री वातावारणको अभाव, महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी पनि आम नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । गाउँ, टोल, सहर, बजार सबै क्षेत्रलाई वैदेशिक रोजगारले प्रभाव पारेको छ । कृषि क्षेत्रमा लामो ..
सुजाता म्याम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् तपाईंलाई
सानो घटना हुनुहुँदैन सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षका मत अभिमत जाहेर भइहाल्छन् । सामाजिक सञ्जालका सबै आफूलाई न्यायाधिश नै सम्झन्छन् । सामाजिक सञ्जाल अहिले वेदना पोख्न, खुसी साट्न, कसैको आलोचना गर्न, फुर्काउन वा उचाल्ने र पछार्नेलाई कार्यमा धेरै सक्रिय छन् । वर्तमान सरकारकी प्रथम महिला सीता दाहाल प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा जाँदा..
संविधान संशोधनमा लागेकाहरूलाई सुझाव
जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताहरूको सात दशक देखिको चाहना अनुरूप गतवर्ष असोज ३ गते संविधानसभाको ९० प्रतिशत संख्याले पारित गरेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको व्यापक तयारी र तामझाम भइरहेको छ । अझ अनौठौ विषय त के छ भने गतवर्ष सबैपक्षका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दा समेत हतारमा ..
बृहत् बर्बादीका दुई दशक
जनता र देशका नाममा रचिएका कथित जनयुद्ध, बाह्रबुँदे सम्झौता, बृहत् शान्तिसम्झौता, संविधानसभा र नाटकीय ढङ्गले जारी गरिएको संविधान देशका लागि ‘काउसो’ साबित भएका छन् । दश वर्ष लामो हिंसात्मक सङ्घर्षलाई पूर्णविराम दिने भन्दै बृहत् शान्तिसम्झौता गरिएको यसै साता दश वर्ष पूरा भएको छ । उक्त सम्झौतायता मुलुकले जे–जस्ता परिस्थितिहरूको सामन..
पुँजी बजारको ब्याक गियर रोकिएला त ?
चाडपर्वको रौनक सकिएलगत्तै खुलेको नेपालको पुँजी बजारमा भने रौनकता छाउन सकेको छैन् । केही समयदेखि निरन्तर रुपमा वियरिष्ट ट्रेन्डमा रहेको बजारमा आइतबार भीषण गिरावट भयो । बजार खुले लगत्तै ८० अङ्कको भारी क्षति बेहोरेको बजार अन्तिममा ५८ अङ्कको गिरावट सँगै बन्द भयो । यससँगै समग्र बजार पुँजीकरण २ खर्बले घट्दै १७ खर्ब ७९ अर्बमा रह्यो [&h..
केही दिनदेखि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच एकताको चर्चा चलिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण दुवै दलमा रहेको नजिकको राजनीतिक आस्था, विचार र सही राजनीतिक दृटिकोण हुन् । मुलुकको भौगोलिक अवस्था र व्यावहारिक कारण उत्तर चीनको भन्दा दक्षिण भारतसँगको सम्बन्ध सयौं गुणा नजिक र बलियो देखिन..
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो र झन तरल नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित घटना बग्रेल्ती हुने गरेका छन् । केही अवस्था यस्ता हुनसक्छन् जसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबार छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पु¥याउन सक्छ । राजीनामाको परिवन्द निर्माण गर्नसक्ने पहिलो प्रकरण संविधान संशोधन र दोस्र..
कठै ती योद्धा माओवादी कता होलान् ?
शान्ति सम्झौता भएको करिब तीन वर्षपछिको कुरा हो । सरकार र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी सेना ब्यारेकमा थिए । देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । देश चलाउने राजा नागार्जुन सरेका थिए । सिंहदरबारमा माओवादीका नेता प्रचण्ड पुगेका थिए । संविधान सभाको निर्वाचन भए पनि दलहरुको खिचातानीले संविधान निर्माण हुन सकेको थिएन् । जनयुद्ध..
कुलमान घिसिङको चमत्कार !
आजभोलि धेरै चर्चा र जनताको स्नेह प्राप्त गर्ने नाम हो विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ । कुलमान नेपाली जनताबीच एक चामत्कारिक व्यक्तित्वका रुपमा देखिनुभएको छ । अपार जलस्रोतको धनी राष्ट्र नेपालमा लोडसेडिङको प्रहारले त्रसित जनतामा एक आशाको किरणको रुपमा कुलमानको उदय भएको छ । कुलमान घिसिङको दक्षता, अनुभव र राष्ट्रप्रतिको इमानद..
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ठूला बाँध परियोजनाका वातावरणीय पक्ष
नेपालमा जलविद्युत्को इतिहास एक शताब्दीभन्दा लामो रहेको छ । सन् १८७८ मा बेलायतमा पहिलो पटक जलविद्युत्बाट बत्ती बालिएको थियो । एसियामा पहिलो पटक भारतमा सन् १९०२ माजलविद्युत् उत्पादन गरिएको थियो भने दोस्रो जलविद्युत् योजना नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्र शमशेरले फर्पिङमा स्थापना गरेका थिए । त्यस्तैगरी हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाललाई..
किन भइरहेको छ मधेसमा सामाजिक विभेद ?
मधेस नेपालको अभिन्न अङ्गका रुपमा नेपालको दक्षिणी भूभाग ओगटेको स्थान हो । जहाँ कुल नेपालको जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा बसोबास छ । नेपालको मध्य भूभाग ओगटेको हुनाले मध्य देश हुँदै मधेश भनिएको हो । वार्षौंदेखि त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई मधेसी भन्न थालिएको हो । मधेस हामीले परिकल्पना गरेभन्दा अझ समस्याले ग्रस्त छ । मधेस पहिलेदेखि नै [&h..
बुद्ध, बोधगया र बोधिवृक्ष
बुद्ध, बोधगया र बोधिवृक्ष यी तीन शब्दहरुबीच बुद्ध दर्शनमा त्रिकोणात्मक सहसम्बन्ध रहेको पाइन्छ । नेपालको लुम्बिनीमा ईसापूर्व ५६३ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम शाक्यवंशीय राजपरिवारका राजकुमार थिए । राजपाटको चरम सुखसयलमा हुर्किएका सिद्धार्थलाई दरबारको परिधिभन्दा बाहिरी संसारको बारेमा केही अनुभव थिएन । एक दिन सि..
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता
नेपाली शब्दकोशका अनुसार ऐन, कानुन वा नीति नियमका आधारमा चलेको शासनलाई सुशासन भनिन्छ । सुशासनको सामान्य अर्थ, जनताको कल्याणकारी काम गर्ने सरकार हो । सरकारले गर्ने शासनमा ‘सु’ उपसर्ग थपिएपछि सुशासन बनेको हो । सुशासनको अर्काे पक्ष प्रशासनमा पारदर्शिता हो । पारदर्शिता भन्नाले सबै कुरा छर्लङ्ग हुनु हो । यसरी भ्रष्टाचारमुक्त शासन नै स..
देशभक्त वामपन्थी सहकार्य !
कम्युनिष्टहरू स्वभावैले राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हुन्छ । व्यवहारमा पनि कांग्रेसहरूको तुलनामा कम्युनिष्टहरू मुलुकप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा बेलाबेलामा पुष्टि हुने गरेकै हो । सत्ता सञ्चालनको सामान्य अभ्यास हेर्दा पनि गणतन्त्र स्थापनापछि निर्माण भएका कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । गणत..